Kid's Smiles Multi-Vitamin & Mineral Gummies - Megafit Nutrition
Kid’s Smiles Multi-Vitamin & Mineral Gummies
Home Shop Kid’s Smiles Multi-Vitamin & Mineral Gummies
အမျိုးအမည်နံပါတ : 000-09.
အမျိုးအစားများ: ဗီတာမင်အမျိုးမျို, ဗီတာမင်အမျိုးမျိုး.
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူး : ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေး
ကလေးများ၏ အရိုး၊ ကိုယ်ခံအား၊ စွမ်းအင်နှင့် သိုင်းရွိုက်ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသည်
အမျိုးအစား : ဂျယ်လီပုံစံအတုံး
တိုက်ကျွေးရမည့် ပမာဏ :ဂျယ်လီပုံစံ အတုံး2တုံး
Kid’s Smiles gummy Multi-Vitamin areagreat tasting full spectrum Supplement that ensures your child gets the top quality and proper dosing of all the essential vitamins and minerals. Kid’s Smiles helps support bone, eye, brain, and immune function.
Everyday Complete Multivitamin & Mineral